Wararka Suuqa Maanta: Manchester United Oo Ka Hartay Declan Rice, Arsenal Oo Dalab Ka Gudbineysa Marco Asensio, Antonio Rudiger Oo Ka Tagaya Chelsea, Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa Maanta: Manchester United oo ka hartay Declan Rice, Arsenal oo Dalab ka gudbineysa Marco Asensio, Antonio Rudiger oo ka tagaya Chelsea, iyo Qodobo kale
September 25, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Manchester United ayaa raadineysa beddelka 22-jirka qadka dhexe ee reer England Declan Rice, United ayaa Xidigan lagu qiimeeyo £ 80-90m ka raadineysa West Ham . (ESPN)
Antonio Rudiger ayaa todobaadkii qaadan kara £ 400,000 haddii uu ka tago Chelsea , Bayern Munich iyo Juventus ayaa diyaar u ah inay u soo bandhigto 28 jirka reer Germany mushaar kordhin weyn oo ku aadan dalabkiisa haatan ee ah £ 130,000 isbuuciiba Blues. (Mirror)
Borussia Dortmund ayaa ka fiirsaneysa weeraryahanka reer France ee kooxda Manchester United Anthony Martial, oo 25 jir ah, si uu ugu noqdo badalka weeraryahanka Norway Erling Braut Haaland, (90min)
Manchester City ayaa dooneysa inay ku garaacdo Real Madrid saxiixa 22 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Paris St-Germain Kylian Mbappe xagaaga soo aadan. (Dailymail)
Barcelona ayaa xiriir la sameysay tababaraha Belgium Roberto Martinez oo ku saabsan bedelka Ronald Koeman oo ah maamulaha kooxda ka dhisan Nou Camp, inkastoo wadahadalada rasmiga ah aysan bilaaban. (Goal)
Dhanka kale ciyaaryahankii hore ee Barcelona Xavi Hernandez ayaa laga yaabaa inuu kooxda ka beddelo Koeman oo cadaadis saaran yahay. (Marca)
Arsenal ayaa dalab 34 milyan oo ginni ah ka gudbisay 25 jirka qadka dhexe ee reer Spain Marco Asensio oo u dhashay Real Madrid . (Mirror)
Atletico Madrid ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo Arsenal xidigeeda 20-sano jirka ee Bukayo Saka. (DailyStar)
Chelsea ayaa laga yaabaa inay weydiisato ilaa afar ciyaartoy oo Real Madrid ah heshiis kasta oo suurtogal ah si ay u hesho 21 jirka reer England ee daafaca midig Reece James. (Express)
Chelsea ayaa ka hartay raacdadii ay ugu dhaqaaqi laheyd Jules Kounde, kooxda ayaa diirada saareysa daafaca dhexe ee reer Brazil Marquinhos, oo 27 sano jir ah ama, saxiixa Juventus iyo Netherlands 22-sano jir ah Matthijs de Ligt. (DailyStar)
Tababaraha Newcastle United Steve Bruce ayaa sheegay inuusan wax wada hadal ah ka yeelan iibinta 24 jirka reer France Allan Saint-Maximin maadaama uu doonayo inuu kooxda ku sii hayo ciyaartoydiisa ugu fiican. (Taariikhda)
Juventus ayaa weli wadahadalo kula jirta weeraryahanka reer Argentina Paolo Dybala, oo 27 jir ah, si ay heshiis cusub uga saxiixato, waxayna soo bandhigtay dalab hormarineed. (Calciomercato)
Barcelona ayaa isku dayi doonta inay iska iibiso kubad sameeyaha reer Brazil Philippe Coutinho oo 29 jir ah suuqa kala iibsiga ee Janaayo. (Marca)
AC Milan ayaa wadahadalo ku saabsan saxiixa xiddiga qadka dhexe ee Spain Isco bilaabeysa waxaana laga yaabaa inay dhameystirto heshiiska 29 jirkaan inta lagu jiro suuqa kala iibsiga Janaayo. (Todofichajes)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Talyaaniga Jorginho, oo 29 jir ah, ayaa sheegay inuu aad ugu dhawaa inuu Manchester City kaga soo biiro Napoli bishii July 2018 ka hor inta uusan u saxiixin Chelsea. (BT Sport)